Maxaa laga filan karaa Shirka Farmaajo ku baaqay? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa laga filan karaa Shirka Farmaajo ku baaqay?
Farmaajo ayaa shir kale oo aan loo dhameyn isagu yeeray qaar kamid ah maamullada iyo duqa Muqdisho afarta bishan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Villa Soomaaliya ayaa shaacisay xalay in Farmaajo uu ku baaqay shir lagu dhameystirayo dadaalkii iyo wada hadalladii laxiriiray hirgelinta doorashooyinka dalka ee u dhexeeyey Dowladda Federaalka Soomaaliya, Dowlad Goboleedyada iyo Maamulka Gobolka Banaadir.
Shirka oo hal maalin socon doono ayaa Khamiista, 4-ta March 2021 ka dhici doonaa Madaxtooyadda, waxaana lagu casuumin Musharixiinta Mucaaradka iyo labada Maamul ee mucaaradka noqday Jubbaland iyo Puntland.
Su'aallaha la is waydiinayo waxay yihiin maxaa kasoo bixi kara shir aan loo wada-dhameyn, oo qeyb kamid ah saamileyda siyaasadda dalka ay ka maqan yihiin? Muxuu Farmaajo uu diidan yahay inuu la fariisto dhinacyada kasoo horjeeda, si loga badbaadiyo dalka fowdo iyo qalalaase siyaasadeed?
Jawaabaha inta badan shacabka ay fahansan yihiin ayaa ah inuu Farmaajo raadinayo mudo-korarsi dadban oo watiga uga luminayo dalka, isagoo khilaafaadka u arka fursad uu qorshihiisa inuu xukunka sii haysto ku meel-marin karin.
Saddex Maamul oo kala ah Galmudug, HirShabeelle iyo Koonfur Galbeed oo Farmaajo uu geystay Madax maqaar saar ah iyp Muqdisho ayay Villa Soomaaliya qorsheysan inay doorashadda ku qabato, taasoo beesha Caalamka ka diidan tahay, maadaama ka dhalan karta natiijo aan loo dhameyn iyo dowlada aan shaqeyn doonin.
Farmaajo mudo-xileedkiisa adastuurga wuxuu dhamaaday 8-dii bishii ilasoo dhaafay, wuxuuna kursiga ku fadhiyaa labo bilood si sharci darro ah, waxaana usii hanqal-taagayaa xukunka dalka oo ku qabsaday afgemi aan dhiig ku daadan.